musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Seychelles Zvino Dzinouya Kubva kuUK Red Rondedzero
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Seychelles kubva kuUK Red Rondedzero
Seychelles yabva kuUK tsvuku rondedzero inoratidzira danho rinotevera mukudzoka kwekushanya kwekuenda.
Iyo Yekunze, Commonwealth & Hofisi Yekuvandudza yakasimudza zano rayo pamusoro pevose asi kwakakosha kufamba kuenda kunzvimbo makumi mana neshanu kusanganisira Seychelles.
Vafambi vanozokwanisa kuwana inishuwarenzi yekuenda, uye vakabaiwa havachadiwe kutora bvunzo dzePCR kana kuisa wega.
Izvi zvinopa kusimudzira kune kwairi kuenda pamwe nendege dzayo nevashandi vayo veindasitiri yekufambisa.
Kubudirira 4 am GMT, Muvhuro, Gumiguru 11, 2021, vafambi vanobva kuUK, iyo Seychelles 'yechitatu huru yekutengesa musika, vangashanyirazve Indian Ocean chitsuwa kuenda kune vafambi vanokwanisa kuwana inishuwarenzi yekuenda uye iyo jekiseni haichadiwi. kutora bvunzo dzePCR kana kuisa wega muhotera yakatenderwa pavanodzoka kumusha.
Kunze kwenyika, Commonwealth & Hofisi Yekuvandudza (FCDO) yakasimudza zano rayo kune vese asi kwakakosha kufamba kuenda kunzvimbo makumi mana neshanu kusanganisira Seychelles sechikamu chehurongwa hwakareruka hwe international travel iyo yaona kutsiviwa kwetraffic mwenje sisitimu imwe chete tsvuku, uye kudzikisira zviyero zvekuyedza kune vanokodzera vafambi vakazara.
Gurukota reSychelles rinoona nezvekunze uye Tourism Sylvestre Radegonde atambira danho rinouya pamberi pehafu yetemu nemazororo echando. “Kubva kuUK tsvuku rondedzero ndechimwe chiitiko chakakosha mukumutsiridza indasitiri yekushanyirwa yeSeychelles, uye ichapa kusimudzira kune kwairi kuenda pamwe nevendege dzayo nevamwe vayo veindasitiri yekufambisa. Isu tinofara kugamuchira zvakare vashanyi vedu veBritain, mhuri uye vanozorora kumuchato vadzokera kuzvitsuwa zvedu zvakanaka. UK yagara iri musika wakasimba weSychelles, ichitora chechitatu mu2019 nevashanyi vanosvika 29,872 19, uye isu tine tarisiro yekuti nenhau huru idzi, isu tichatanga kuvaona zvakare muhuwandu hwakakura. Nezvirongwa zvehutano nekuchengeteka zvakagamuchirwa nevashandi vekushanya uye nzvimbo dzakagamuchira zvitupa zveECVID-XNUMX zvakachengeteka, vashanyi vedu vanovimbiswa zororo rakachengeteka uye rinonakidza. "
Vashanyi kuSychelles vanofanirwa zadza fomu rekubvumidzwa kwekufamba pano uye ratidza humbowo hweasina kunaka PCR bvunzo maawa 72 usati waenda kwairi kuenda.
Seychelles yaive imwe yenzvimbo dzekutanga kuvhura zvizere kune vashanyi zvisinei nemamiriro ekubaiwa nhomba munaKurume apfuura zvichitevera chirongwa chakasimba chekudzivirira chakaona ruzhinji rwevanhu kubayiwa nhomba. Izvozvi zvave kutanga kupa booster doses yemushonga wePfizerBioNTech kune vanhu vakuru pamwe nekudzivirira vechidiki. Huwandu hwezviitiko zveCOVID-19 zvadonha zvakanyanya mumavhiki apfuura uye nezviitiko zvishoma zvinoitika pakati pevashanyi.
James Bond Movie Zvino Inosimudzira Jamaica Tourism Demand...
Asian Transformative Pharmaceutical Zvigadzirwa Kambani...